I-Sango Sea Coral - iSearch
Qala Ama-Superfoods Yebo, unempilo I-Sango sea coral
I-coral yolwandle isendaweni yethu yaseYurophu njengendlela yokwelapha engenzeka ekhanyisa isiko eside, engaziwa kahle. Udumo nokusebenza kwalo mbhalo we-polyp fossil, Nokho, ubukeka emuva emlandweni omude kakhulu. Ngokulinganiselwe, i-coral yolwandle ingabheka emuva eminyakeni engu-5.000 eyedlulile, okwakungabonakali kukuthakazelisa, kodwa futhi ikhulule izinhlungu nezinhlungu eziningi. Ama-polyps asetshenziselwe izimboni ayenze umsebenzi okwandisiwe emayini yamaminerali kanye namaminerali futhi ngaleyo ndlela angayenza imiphumela emihle emzimbeni womuntu. Ngakho-ke, isifo se-thyroid singanciphisa futhi izicubu ezibhekene nokuvuselelwa kwamathambo nazo ziyathuthukiswa. Uma unenkinga yezigqoko, khona-ke ukusetshenziswa kwamakhorali kungakunikeza ikhambi, ngoba ngisho nasendabeni yokuzithokozisa, wonke umgcini ogcwalisa injongo yakhe.
1 Isicelo nomphumela
2 I-coral yolwandle ingasetshenziselwa i-deacidification
3 I-coral sea ivikela izifo zenhliziyo
4 I-coral yolwandle ivimbela ukukhubazeka ngenxa yokudla okukodwa noma okungekho emthethweni
5 Umsuka nokukhiqizwa kweSango sea coral
6 Ukuvuna nokukhiqiza
7 Izithako zamakhorali olwandle
8 I-Magnesesi e-coral
9 Landela izakhi namaminerali
10 Isicelo nesilinganiso
11 Imiphumela emibi yama-corals olwandle
12 Ucwaningo olwandle olwandle
13 Ukuthenga nokugcina imikhiqizo yama-coral
14.0.0.0.1 Dlala ividiyo efanelekayo ku-Youtube. Sicela uqaphele inqubomgomo yobumfihlo.
Ngomuthi wendabuko wase-Asia, i-polyp fossilized iyingxenye ebalulekile mayelana ne-5.000 iminyaka. Isiko sasikhona ngisho naseMedithera eSpain ekhemisi elidala kunazo zonke kuleli lizwe igama lomndeni futhi lalikhulu futhi lihlobene ngokujabula. Ngisho emazweni aseMedithera aseYurophu, omunye uyazi imiphumela emihle yezempilo ye-coral futhi uyayisebenzisa izikhathi eziningi kuze kube yilolu suku.
Esigabeni esilandelayo, izinkambu ezifanele zokusetshenziswa kanye nezindlela zokusebenza ze-coral manje zichazwe futhi zichazwe ngokuningiliziwe.
I-coral yolwandle ingasetshenziselwa i-deacidification
Kuyaziwa ukuthi ngaphezu kwe-90,00% yesintu emazweni asentshonalanga unomzimba onamandla kakhulu. Izizathu zalokhu zibandakanya indlela yokuphila engenampilo ngokucindezeleka okukhulu, ukudla okunomsoco kanye nomthelela omubi wezemvelo. Uma umzimba womuntu usuvele ugcwele amandla, okuhlangenwe nakho kuye kwabonisa ukuthi inqubo yokuguga iyasheshisa izikhathi eziningi. Ngaphandle kwezibonakaliso zokuguga, izinkinga zempilo nezinkinga ziyaqhubeka nokuba nethonya. Kulo mongo, kufanele kuqashelwe ukuthi ngisho nokushisa okuncane kunomthelela emkhatsini we-acid-base balance. Okufanayo kungabanjwa ngokuphelele ngenxa yalokhu. Ukwakha ibhalansi kuleli phuzu, unikeza i-coral yolwandle.
Isimo esisebenzayo seSango Marine Coral, iCalcium ne-Magnesium ku-Ratio 2 efanelekile: i-1, i-Dose ephezulu, i-Vegan ne-Bioavailability ephakeme, Isengezo sokudla okunesondlo se-Bone & Acid Base House, 180 Capsule Inkomba
ISIMANGALISO SOKUQINISA KAKHULU: Kuphela yiSango Marine Coral yaseJapan yasekuqaleni enokusatshalaliswa okuyingqayizivele kwe-calcium yezakhi eziphambili kanye ne-magnesium esilinganisweni esifanele somzimba se-2: i-1 - amakhorali aqhamuka esiqhingini sase-Okinawa, 'Centenarian Island' "Futhi iqukethe cishe ezinye izinto ze-70 zokulandela umkhondo.
AMANDLA OKUGCINWA: I-Sango sea coral Kuyamangaza ngokushesha ukuthi i-bioava etholakalayo futhi amaminerali ayo amuncwa ngokuphelele - ngenxa yemvelo yayo ekhethekile, i-ionises uma ihlangana notshwala, lapho amakhompiyutha aqukethe i-calcium ne-magnesium angafinyelela kalula egazini namaseli omzimba ngemuva kokuthatha amaphilisi.
I-STRONG DUO: Ngokwemvelo i-Sango Coral iqukethe i-calcium "ne-magnesium" emibili yamathambo, ngokuqinisekile ingenye yezakhi ezaziwayo emathanjeni, njenge-magnesium isiza ukugcina amathambo ajwayelekile futhi isiza ukugcina amazinyo ejwayelekile.
UKUVIVINYWA KOMHLABA WONKE WOKUPHAKATHI: Yonke imbandela eyodwa yomkhiqizo ihlolwe ngokuzithandela ukungcoliswa kwemisebe yelebhu ezimele yaseJalimane ukuze iqinisekise ngokuphelele ukuphepha komkhiqizo.
KUSUKA KU-GRATITUDE NOKUTHANDA KOKUTHOLAKALA: Imvelo ephumelelayo iqinisekisa ukukhiqizwa okuqhubekayo nokunemvelo, isebenzisa kuphela ukuchitheka kwamakhorali kulahliwe, okungabhubhisi amadwala we-coral noma ukubulala ama-coral - ama-Sango Sea Clam Capsules agcwele i-vegan, mahhala izithasiselo futhi akhiqizwe eJalimane.
I-coral sea ivikela izifo zenhliziyo
Ngaphandle kokulinganisela kwe-acid-base engalinganiselwe, ukungabi namandla izimpawu zomzimba ngamunye kungabangela nezinkinga zempilo. Izimpawu zokulahlekelwa endaweni yokunikezwa kwe-magnesium, isibonelo, kubangela ukukhathazeka, ukuxubana, ukwesaba noma ngisho nokukhanda ikhanda. Ngokusebenzisa ukukhubazeka kwamakhorali akukwazi ukuhlawulwa kuphela, kodwa ngisho nokuvinjelwa. Lesi simo singavimbela ukuhlukumeza kwenhliziyo futhi sinomthelela wokulwa nokuvuvukala.
I-coral yolwandle ivimbela ukukhubazeka ngenxa yokudla okukodwa noma okungekho emthethweni
Abantu abadla ikakhulukazi oyedwa noma abafana, njengoba izitha zigwema ngamabomu imikhiqizo edla inyama, zingase zihlupheke, ngaphandle kokungazi. Ukuze kulungiswe izimo ezingenakwenzeka zokunakekelwa kusukela ekuqaleni, ukungena kolwandle olwandle kungase kube nzuzo.
Umsuka nokukhiqizwa kweSango sea coral
Omunye uthola ama-corals ezindaweni ezihlala olwandle ezishisayo noma ezishisayo. Ngokuyinhloko, njengoba sekushiwo kakade, kunezinhlobo ze-polyps ezifakwe emasimini ayenzile uhlobo olunezinhlobo zamakholoni kulezi zifunda. Kunezinhlobonhlobo ezahlukene zamakhorali zasolwandle eziletha izici eziningi. I-Sango Sea Coral itholakala, isibonelo, kuphela esifundeni sase-Okinawa, Le coral iye yaziwa amakhulu eminyaka futhi iqinisekiswe okokuqala ngisho naku-8. Ikhulu leminyaka lalingeniswa emazweni aseYurophu. Kodwa-ke, phakathi neminyaka, isintu eYurophu sikhohlwe ngalokhu kukhula kolwandle futhi yingakho kwasekukhohliwe ekuqaleni. Njengokwesifunda sase-Okinawa, noma kunjalo, abantu asebekhulile abaningi basebenzisa i-100. Lapho ososayensi befinyelela kule minyaka, banquma ukuthi lokhu kwakungenxa yokuthi abantu baphuza lapho. Ngenxa yale coral ekhethekile, amanzi axazululwa ngezinto eziningi ezibalulekile zokulandelela nezakhi. Lokhu kwaholela ekuhlinzekeni okungcono komsoco kubantu ekugugeni. Amanzi angaphansi komhlaba asetshenziselwe ukusekela isintu somuntu ngezindlela eziningi ezahlukene. Kodwa-ke, kuvunyelwene ukuthi ngaphezu kwamanzi acebile okondla, ukudla okunempilo ikakhulukazi kunendima ebalulekile. Ngokulingana, kunezifo ezincane zesifo senhliziyo, ama-cancers ambalwa kanye nokunye ukulahlekelwa okubonakalayo okungenani kuncane.
Ukuvunwa kwama-coral nakho kunomusa kakhulu, ngakho-ke ama-coral langempela awonakele. Izingxenye zamakhorali kuphela ezikhishwayo ezikhishwa emgodini wangempela we-coral bese zenziwa zibe yi-powder.
Ngalesi sikhathi, igunya lezemvelo laseJapane linikezela ngokukhethekile ukuvuna nokuhambisana.
Ngaphezu kwalokho, amakhorali olwandle angavuna kuphela ukujula okukhona kwe-60 kuya ku-100 m. Nasi iqiniso lokuthi akukho ukukhanya kwelanga ngakho-ke awekho ama-coral aphilayo lapho. Kuyinto yokuphila okudingekayo ekukhanyeni ukukhula futhi okungekho lapho. Lapho isivuno sesiphelile, amahlumela e-coral ahlanzwa ngokucophelela bese esomisiwe. Izingxenye zishiswa ku-200 degrees. Lokhu kwenzeka, kodwa nje kancanyana kakhulu, ukufaka inzalo izithako. Isinyathelo sokugcina yi-pulverization. Khona-ke uzothola izinto eziyigugu mhlawumbe nge-powal coral noma ngesimo samakhisisi emakethe futhi uzikhethele ukuthi yikuphi ukuma okuthandayo.
Izithako zamakhorali olwandle
I-coral yolwandle kufanele ibe nokuningi kakhulu kunezingxenye ze-70 zokulandelela kanye namaminerali. Ngenxa yalokho, uhlu olulandelayo lude.
Okufanele kakhulu kuhlanganisa:
Lezi zinto zodwa zibaluleke ngempela futhi zibaluleke kakhulu emzimbeni womuntu njengoba zixhasa futhi zikhuthaza izinqubo zomzimba. Ngaphandle kokutholakala okwanele kwalezi zinto emzimbeni, izindlela zomuntu ngamunye zingeke zenzeke.
Isibonelo, isithako esijwayelekile eSango Sea Coral yi-20% Calcium ne-10% Magnesesi. Ngokwezizathu, ngokwezifundo ngabanye, lokhu kusatshalaliswa kwezinto nakho kuyasiza ngempela. I-calcium inhle ngamathambo namazinyo. Ngokuvamile, kule ndawo yokungaqondi kahle, i-calcium itholakala ikakhulukazi ebisi, kodwa akunjalo. Ungayithola futhi kumakhorali futhi ulethe umndeni wakho emuva emgqeni noma wakhe. I-vegans iqhaza, ikakhulukazi ngenxa ye-magnesium ne-iron okuqukethwe kokudla okuhlukile, njengoba kuvame ukuntuleka. Futhi, abantu abanokuhlukumezeka kwe-lactose bayakwazi ukulawula ukubaluleka kokulinganisela kwabo kwe-calcium, ngaphandle kokuba badle ubisi noma imikhiqizo yobisi ngama-coral. Kuleli qembu labantu, kubuye kudingekile ukwengeza le nto, njengoba kuhileleke ezinkambisweni eziningi ezihlukahlukene ze-metabolic futhi kulawula isigqi senhliziyo.
Ngaphezu kwe-calcium, Yebo, uzothola i-magnesium. I-magnesium ibuye ibhekwe njengengxenye ekhona yesistimu yesondlo somuntu. Uma ukunakekelwa okwanele kungaqinisekisiwe, izinkinga zezempilo zivela nakulo mongo. I-Magnesium, ngokwayo ayikwazi ukukhiqizwa ngumzimba, kodwa akuyona into ebalulekile ekusebenzeni kwezinqubo eziningi ze-metabolic. Uma kungekho ukutholakala okwanele, khona-ke kukhona izinkinga zempilo. Ngakho-ke, kungaholela ezinkingeni, ikakhulukazi emanzini-ama-carbohydrate metabolism, noma ukuchithwa kwamaprotheni kungalungile.
Ukuhlanganiswa kwezinto ezimbili ze-magnesium ne-calcium akufanele kuthathwe ngaphansi komzimba womuntu. Zombili izinto zixhomeke ngokubambisana futhi, ngaphandle kokuba khona kwesinye isici emzimbeni wesintu, ngeke zikwazi ukusebenza ngokuphelele. Ama-corals anikeza ukuhlanganiswa okuphelele kokubili izithako. Lapha uzothola njengomthengi izindlela ezivivinywe futhi ezivivinyelwe ukulinganisela ngokushesha ibhalansi yezakhi.
Landela izakhi namaminerali
Kodwa-ke, ama-polyps asetshenziselwa iziqu aqukethe amaminerali amaningi kanye namaminerali okudinga umzimba. Lezi zinto ngokuvamile zitholakala kwifomu edidiyelwe. Ngakho-ke, zingase zithathwe kangcono yizibungu zomuntu ezingenayo futhi zilandelwe. Kanti, imiphumela iyinkimbinkimbi kakhulu ukuchaza. Okuqukethwe okwenziwe ngethusi kanye ne-selenium nakho kuyathandeka kakhulu kulo mongo, ngoba kudala umphumela okuthiwa i-antioxidant emzimbeni, okwenza ukuba kukhishwe ama-radicals amahhala, okuzokwenza kube lula ukwenza inqubo yokuguga.
Abasebenzisi be-corals bahlale bekhuluma ngokubukeka ngendlela efanele kanye nesisusa esiphezulu. Kuzo zonke, lokhu kubuye kukhulume ngomphumela ovuselelayo we-coral sea.
Imvelo ephumelelayo iSango Marine Coral, iCalcium neMagnesium ku-Ratio 2 efanelekile: i-1, i-Dose ephezulu, i-Vegan kanye ne-Bioavailability ephakeme, Isengezo sokudla okunesondlo se-Bone and Acid-Base Kaya, 100 g Powder inkomba
AMANDLA OKUFINYELELA: I-Sango Sea Coral ishesha ngendlela emangalisayo ngokumangazayo futhi amaminerali ayo amuncwa ngokuphelele - ngenxa yemvelo yayo ekhethekile, i-ionize lapho ihlangana neziphuzo, lapho amakhompiyutha aqukethe i-calcium ne-magnesium ngemuva kokumunca impuphu ivuselelwa emanzini kalula egazini nasezweni. ingangena kumaseli womzimba.
UKUXOLELWA NOKUTHANDA KOKUHLELA: Imvelo ephumelelayo iqinisekisa ukukhiqizwa okuzinzile futhi okunemvelo, kusetshenziswa kuphela ukuchitheka kwamakhorali kulahliwe, okungabhubhisi izixhobo zamakhorali noma ukubulala ama-coral - iSango sea coral powder i-vegan ngokuphelele, ayinazo izithasiselo futhi ikhiqizwe eJalimane.
Ochwepheshe bacebisa ukuthi ama-coral kufanele athathwe okungenani amasonto e-12. Umjikelezo wokuthatha isikhathi esifushane angeke ube nomthelela owanele eklasini langempela. Ngokuyinhloko, umehluko wenziwa phakathi naleso sikhathi ukuthi kukhona yini imiphumela emibi kakhulu kumthengi noma nje kuphela isenzo sokusekela nokuvimbela okukhona ukulwa nokuntuleka kwezimpawu. Okokuqala, amaviki e-12 ahlinzeka ngesisekelo esihle sokugcwalisa amakhopho amaminerali emzimbeni womuntu. Kodwa-ke, ukuqinisekisa ukuthi usebenza ngokusemandleni ekufinyeleleni ekuhloleni nasekuqhubekeni kokudla kolwandle olwandle, kufanele uxhumane nomsebenzi wezempilo ozoxoxa ngemigomo yokusebenzisa nawe futhi anqume indlela efanele yokubamba. Futhi phawula ukuthi ukunambitheka kwangempela kwesikhumba se-coral kubonakala ngokuhlukile. Omunye isiguli ubona ukunambitheka njengokungathathi hlangothi, okulandelayo kunokuba usawoti. Lokhu kuncike ekuthandeni komuntu ngamunye. Ngokuyinhloko, noma kunjalo, uma ukuhlolwa kunconywa ukuba ungathathi ngaphezu kwama-gram angu-3. Konke okunamathelela ngaphezulu akukwazi ukucubungulwa ngomzimba futhi kuxoxwe nge-system digestive. Ngokuyinhloko, kufanele uthathe ama-coral kuphela nge-vitamin D3 eyanele kanye nokunikezwa kwe-K3, njengoba lokhu kuyimfuneko yokumunca nokucubungula into ekhona emzimbeni womuntu.
Imiphumela emibi yama-corals olwandle
Imiphumela emibi ye-coral ayinakwenzeka, kepha uma udla okungaphezulu kwegrimu ye-3 enconyiwe ngosuku, umzimba awukwazi ukucubungula lezi zinto futhi uzifake ngokwemvelo ngokusebenzisa uhlelo lokugaya. Ngakho-ke, kungacatshangwa lapha ngomuthi ogcwele wemvelo.
Ucwaningo olwandle olwandle
Ikakhulukazi, ku-coral marine coral, kunezifundo ezihlukahlukene eziphenya futhi zimelele umphumela we-coral emzimbeni womuntu. Lezi zihlanganisa i-Okinawa Centenarian Study (1976-1994). Noma kunjalo, ezinye izifundo eziningi zingatholakala kulokhu.
Ukuthenga nokugcina imikhiqizo yama-coral
Ungathenga i-coral yolwandle ngokuyinhloko kumafomu we-2. Ngakolunye uhlangothi, efomini elihlanzekile, elingathathwa ngotshani noma kwezinye iziphuzo noma ngesimo samaphilisi. Ngokuyinhloko kufanele ugcine ubumnyama be-coral futhi ungabonakali ukushisa okukhulu. Phakathi naleso sikhathi, ungakwazi ukulawula ama-capsules kanye ne-powder kakade ezitolo zezidakamizwa, ama-pharmacy noma nge-intanethi. Vele uqiniseke ukuthi uthemba umthengisi kule nqubo, ungase ujabulele ukusebenza komkhiqizo.
IPiowald Sango Vital - iSango Marine Coral - I-250g Powder ene-calcium ne-Magnesium Inkomba
UMGOMO WE-PIOWALD - Umkhiqizo womkhiqizo: I-Piowald Sango Vital - 100% uSango Marine Coral powder ovela e-Okinawa. Umthombo wemvelo we-calcium (20%) ne-magnesium (10%) ngokwesilinganiso somzimba we-2: 1.
I-ORIGIN - Isiqhingi sase-Okinawa (Japan) sakhiwe kakhulu ngamakhorali weSango. Yonke indawo izimbotshana zamatshe asolwandle asolwandle. Kulezi zidalwa, amakhorali asolwandle aseSango atholakala ngenqubo yemvelo eqonda imvelo evela ekujuleni kwe-300m.
YENZIWE EJALIMANE - Sigcwalisa imikhiqizo yethu ngokuthengisa izinto ezisendlini. Ngakho-ke sinemizila emifushane yokuhamba nokulawulwa kwekhwalithi ngqo endlini. Akunabakhi bezinkontileka!
ISIVIVINYO SE-LABORATORY: I-batch ngayinye ihlolelwa imisebe kanye nokungcola ku-DE.
NGAPHANDLE KOKUGCINWA - Isango elihlanzekile leSango Marine Coral Powder evela e-Okinawa.
I-coral yolwandle iyatholakala ngezimiso ezimbili. Kungenzeka ngefomu elenziwe ngokuphelele noma efomini ye-capsule. Lapho uthola khona le nqubo uqobo kuwe. Isidakamizwa sandisa umzimba wakho wokuphila, ngakho-ke ungathola imithi ethile nakakhulu. Ukungenisa kungenziwa njengengxenye yokwelashwa okwelapha nge-naturopath, njengengxenye yesilinganiso sokuzimela. Vele uqiniseke ukuthi wenza ukwelashwa isikhathi eside okungenani amaviki angu-12. Uma kungenjalo, akunakucatshangwa ukuthi isimo sezondlo sithuthuka.
Eminyakeni yamuva, ukubaluleka kwamakhorali olwandle emithini yemvelo kuye kwazizwa futhi. Ukwaziswa kwangempela kwalokhu sekuvele kusukela ku-8. Ngemuva kwekhulu leminyaka uKristu abuyele eYurophu. Kwaphela kuphela ukungena futhi kwazuza ekuhambeni kwe-superfood kanye nokuthuthukiswa okwelashwa okwamanje.
Kungasetshenziselwa kahle kakhulu ekuhloleni kwezifo ezikhona noma ekuvimbeleni amaminerali ngamunye kanye nezici zokulandelela. Umphumela omuhle kakhulu wukuthi, njengoba sekushiwo kakade, awekho eminye imiphumela emibi edinga ukucatshangelwa.
Dlala ividiyo efanelekayo ku-Youtube. Sicela uqaphele Inqubomgomo Yemfihlo.
Isihloko sangaphambiliniuwoyela kakhukhunathi
Isihloko esilandelayoKungani kufanelekile ukuthenga ikhofi ephilayo?